Cishe wonke umuntu ujwayelene inkinga ka-hemoglobin ongaphakeme. Othile ngihlangane naye ngelinye ilanga uqobo, kodwa othile kwadingeka ukhathazeke izingane zabo noma amanye amalungu omkhaya. Phela, ngokusho izibalo, oyedwa kwabayisihlanu emhlabeni uhlushwa isifo sokulahlekelwa igazi. Kwenqwaba amacala - abesifazane, ngoba Umama wabo Nature awanikeze isipho ukuba sikhuthazele lapho eseqala ukuya esikhathini, ukukhulelwa, lactation isikhathi, kanye beriberi entwasahlobo futhi kube lukhuni mono-Ukudla, ngawo izintokazi eziningi ezivivinyayo ukuze uthole kabusha ngokuvumelana.
Indlela ukuqaphela-hemoglobin ongaphakeme?
Kuvele impahla ebalulekile-hemoglobin (iron-amaprotheni linamathele erythrocyte) sivezwe kula ikhono ihambise umoya-mpilo zonke kwezitho nezicubu zabantu. Lapho ukuntula imakwe ka-hemoglobin ngu-mpilo yokulamba kuthinta zonke izinhlaka, ikakhulukazi ubuchopho kanye nezinso.
Izimpawu sokuntuleka kwegazi kanye nezimpawu zako ezisemqoka ezisetshenzisiwe:, ubuthakathaka, ubuhlungu bekhanda, tinnitus, "merzlyavost" nemilenze ngokweqile kanye ukukhathala, ukungakuthandi ukudla ukuqwasha. Ukuzizwa sengathi ukugula, okokuqala udinga ukubona udokotela ukucacisa uphethwe. Uma kungekho izinkinga ukugayeka yensimbi pheshana emathunjini, ke Umeluleki noma okunomsoco uzokutshela ukuthi yini izidakamizwa futhi yini imikhiqizo ukwandisa elithwala umoya-mpilo.
Ngokuzimela uthole amavithamini ekhemisi yensimbi odokotela hhayi Kunconywa, njengoba lezi izindlela ukweqisa izidakamizwa kubangela i-hemoglobin aphakeme angase avuse okuvela nomdlavuza, isifo sikashukela, isifo sokuqina kwemithambo yegazi, isifo samathambo. A okunye okukhulu lokwelashwa ukuncipha encane yalolu ketshezi kungaba udle ukudla okune-heme yensimbi. Ukwazi lokho ukudla ukwandisa elithwala umoya-mpilo, futhi lapho izingxenye ukugxambukela yensimbi ukumuncwa, ungakwazi ngokukhalipha ulungise ukudla kwabo.
Norma yensimbi, futhi kanjani ezakha kusilela?
yensimbi Jwayelekile, kungakhathalekile ubulili lomuntu, imayelana 1.5 mg / usuku. Nokho, umzimba ezingase zimuncwe yizitshalo kuphela lwale ion amaminerali. Ukukhuthazela kubalulekile ukuze silondoloze inani yensimbi eyanele ezidingekayo okungenani 15 mg we microcell.
Abaholi ku-heme yensimbi okuqukethwe kubhekwe imikhiqizo inyama, zazo umzimba ukubamba okungenani u-30% we amaminerali oyifunayo. Ibe isilandelwa inhlanzi kanye amaqanda kusukela lapho umuntu ethola 15% yensimbi. Neyesithathu - izithelo nemifino ezisinika-5% we ketshezi. Lokhu akusho ukuthi yokudla komuntu kufanele enqoba imikhiqizo inyama elithwala umoya-mpilo alimaze abanye. A ukudla olinganiselayo plus nokusetshenziswa okufanele lezi izitsha eceleni abamelene zabo ngokushesha ukubuyisela lemali edingekile of amaprotheni.
imikhiqizo Optimum - yensimbi abahlinzeki
indawo Okokuqala kule simo ukudla okunothe heme yensimbi, yenkomo kuwufanele. On the yesibili - inyama yenkonyana, unogwaja kanye isibindi izilwane nezinyoni. Kufanele nginilungisela izoso noma Steak, futhi isibindi gazinga "ngegazi." Kuyinto kulezi izitsha imikhiqizo ukugcina yensimbi, futhi lapho upheka noma ngokubeka lesi sici trace libhujiswa.
imikhiqizo Inyama nge-hemoglobin ongaphakeme - panacea wangempela, kodwa kumele kuhlanganiswe abilisiwe (kuyadingeka ukudalula) bona, nokunye okufana nokolweni, kusukela beetroot engahluziwe isanqante isaladi, apula, ithanga, emhlophe, utamatisi, currants, cranberry, izithelo ezomisiwe, izinhlamvu ze-sesame, imidumba. Imikhiqizo yemifino yensimbi ihlukile, futhi degree of nokwenziwa, kakhulu, kodwa ephumelela kakhulu ukuzisebenzisa injalo zemvelo, ngaphandle bazithobisa ukufudumeza ukwelashwa.
Yini imikhiqizo kungandisa inyama-hemoglobin? Ukudla kwawo ubuswa ukhunta amhlophe, kelp, zonke izinhlobo amantongomane, imifino, izithelo, amajikijolo (ungasebenzisa ijusi noma Smoothies, cocktail).
abathandi kwaselwandle ungathola insimbi clams, i-squid, izimfanzi, Roe izinhlanzi zasolwandle. Amaqanda izikhupha, shokolethe (nge wokuqukethwe lelisetulu nokhokho oyimpuphu), decoction of izimbabazane, clover, dandelion izimpande kanye fireweed, uju, newayini elibomvu, ubhiya imvubelo kanye walnuts - lena impendulo engaphelele ukuze umbuzo yini imikhiqizo ukwandisa elithwala umoya-mpilo.
A amazwi ambalwa mayelana "abasizi" futhi "blocker" yensimbi ukumuncwa
Zishukumisa ukumuncwa esiphezulu yensimbi amavithamini C, A, B12, i-folic acid. Kodwa yini ikhofi noma itiye ukuvimba ukumuncwa ketshezi. Uma kunzima ukuyeka isiphuzo oyintandokazi ezifana ke ningamamukeli ngemva kokudla, futhi ngehora elilodwa noma amabili noma amathathu. Calcium futhi kuphazamisa yensimbi ukumuncwa, ngakho ubisi kanye neminye imikhiqizo nalesi sakhi okwandisa amaprotheni yensimbi-equkethe kuyadingeka ukuze kukhawulwe. Hlala uphilile!
Ububi Obungaphakathi - isibuyekezo. Sibutsetelo umdlalo The Evil Within